Abaal marin la siiyo xidigaha dhabta ah ee bulshadeena - Meals on Wheels
Abaal marin u ah xiddigihii dhabta ahaa ee ka dhex jiray beesheena
In kasta oo Justin Timberlake aanu aakhirkii hoos ugu dhigin Meals on Wheels si loogu qaado gaadhsiin gaar ah, haddana weli waxaannu haysannay baashaal badan oo aannu isku dayeynay inay taasi dhacdo. Waxaanan rajeyneynaa inaad adiguna sidaas sameysay!
Waad ku mahadsan tihiin dhammaantiin aad wadaagteen fiidiyowyadeenna, tweets-ka iyo qoraallada aan soo dhignay ee Facebook-ga si loo helo Mr. Waan ogayn inay ahayd tallaal dheer in Justin la helo si loo sameeyo kamarad ahaan dirawal gaarsiinta, laakiin hadafkeenna guud wuxuu ahaa inaan ka iftiiminno shaqada muhiimka ah ee xiddigaha dhabta ah - tabaruceyaasheena joogtada ah
Toddobaadkii Super Bowl oo keliya, mutadawiciinteennu waxay qiyaastii 19,000 oo cunto ah u gudbiyeen waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool magaalooyinka Mataanaha ah oo dhan. In kasta oo ciyaarta iyo waxqabadka xilligii nasashada labaduba ay ahaayeen kuwo cajiib ah, haddana dadaalka tabaruceyaasheennu maalin walba u qabtaan runtiina waa maskax-jab. Tabaruceyaasheena runti ma joojin karaan bixinta.
Waxaanan had iyo jeer adeegsan karnaa caawimaad dheeri ah.
Bixinta Cunnooyinka Lugaha Lugood waxay qaadataa hal saac oo keliya, laakiin dareenka wanaagsan ee aad ka heshid gaarsiinta ayaa sii dheeraanaya. Tabaruceyaashu waxay cunnooyinka ka qaadaan mid ka mid ah in ka badan 30 goobood oo lagu daabulo metro oo la gaarsiiyo lix illaa 10 qof oo jidka ku jira.
Waa kan qaadin maad ah sida ay u shaqeyso:
Qaar badan oo ka mid ah mutadawiciinteennu waxay go'aansadaan inay keenaan bishiiba mar iyo isku-duwayaasha waddada waxay ku dadaalayaan inay kaa dhigaan isla waddo mar kasta. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad barato dadka aad u gudbineyso.
Waqtigaan la joogo, baahida darawallada ayaa ugu weyn Brooklyn Park / Brooklyn Center, Minneapolis, St. Paul iyo North St. Paul / Maplewood / Oakdale. Baro wax badan oo ku saabsan gaarsiinta cuntada ama is qor si aad halkan u keento.
Haddii aad inbadan ka shaqeysid daaha gadaashiisa, waxaan sidoo kale u baahanahay mutadawiciin ka shaqeeya Cunnada jikada Fursadaha. Tabaruceyaasha jikada ayaa ka caawiya baakadaha alaabada la keenayo sida miraha darayga ah, duubbada cashada ama buskudka dubka lagu dubay, iyo isu soo uruurinta cuntada maalintaas la keenayo. Waxbadan ka baro tabarucida jikada halkan.
Fursadan iskaa wax u qabso uma baahna gelitaanka gawaarida iyo wareejinta 1.5-illaa 2-saac ayaa la heli karaa 9 subaxnimo-3 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha. Saxiix u wareejinta shaqada Jikada Fursadaha halkan.
Ku biir Cunnada Wheels tabaruceyaasha kooxda Facebook
Haddii aad tahay mutadawiciin cusub ama aad samaynaysay sannado, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto midkeenna cusub Cunnooyinka Wheels Tabaruceyaasha Kooxda Facebook. Waxaan rajeyneynaa inaan siino dariiq cusub oo mutadawiciinta ay isugu xirmaan midba midka kale, iyo sidoo kale inaan kooxda la wadaagno fursado iskaa wax u qabso iyo baahiyo gaar ah.